Sony VPL-FHZ55 Projector (White) ~ ICT.com.mm
HomeSony VPL-FHZ55 Projector (White)
Sony VPL-FHZ55 Projector (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Laser light source, Lumen 4000,WUXGA (1920 x 1200), Long Lamp Life 20,000 Hours, Screen Size: 40″ to 600″ (measured diagonally) (1.02m to 15.24m), Build-in Edge Blending function, 5BNC, Component,... [Learn more]
Laser light source, Lumen 4000,WUXGA (1920 x 1200), Long Lamp Life 20,000 Hours,
Screen Size: 40″ to 600″ (measured diagonally) (1.02m to 15.24m), Build-in Edge Blending function, 5BNC, Component, Composite, DVI-D, HDMI, Sub-DI5, S-Video in,
Mdl: VPL-FHZ55, Sony projector 1 year warranty Lamp
Sony ရဲ့ VPL-FHZ55 ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 3LCD laser projector ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအရ အမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားပြီး Full HD ထက်အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ WUXGA ပုံရိပ်တွေကို အသေးစိတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် ကြည့်ရှုသူတွေဟာ ကြီးမားလှပတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ကြည့်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး သာမန် Projector တွေလို pixel တွေအနေနဲ့ မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စွမ်းအင်ချွေတာမှုအတွက် Projector ရဲ့ Laser Light ကို Soney မှ 3LCD BrightEra™ technology အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ အထူးပုံရိပ်အရည်အသွေးတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အရောင်စုံလင်မှု ကလည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Energy Saving Feature နဲ့ စက်ရဲ့ သက်တမ်းမြင့်မားမှုတို့ကြောင့် အသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကော်ပိုရိတ်တွေ၊ ဆေးဘက်နဲ့ အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေ စသဖြင့် ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ လူအများရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VPL-FHZ55 ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိတို့ ဖန်တီးပြသချင်တဲ့ အရာတွေကို အကန့်အသတ်မရှိ အရည်အသွေးမြင့်မားသာလွန်စွာနဲ့ ဖန်တီးပြနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The VPL-FHZ55 is the world’s first 3LCD laser projector, delivering game-changing performance and reliability in mission-critical installation applications.It’s ideal forawide range of installation needs, producing bright, detail-packed WUXGA images witharesolution that’s higher than Full HD. So your audience only sees big, beautiful pictures, not pixels.The environmentally-friendly laser light source is teamed with 3LCD BrightEra™ technology by Sony. You’ll see the difference with superb image quality and 4000 lumen brightness, plus exceptional contrast and consistent colour stability.What’s more, the laser light source typically is rated foratypical 20,000 hours operating life – far longer than the lamp in traditional projectors. Dramatically reduced maintenance requirements are complemented byarange of energy-saving feature, significantly driving down total lifetime ownership costs.The VPL-FHZ55 fits smoothly into almost any environment – from academic institutions, corporate, medical and public sector organisations to visitor attractions and retail spaces. Seamlessly blend images from multiple projectors to create super-sized displays, or even project true, accurate images onto curved surfaces. Install the projector at any angle – even on its side or upside down. With the VPL-FHZ55, there are no limits to your creative freedom.